May 25, 2021 - Babal Khabar
May252021 by EditorNo Comments
कोभिडको अनिश्चितताले अर्थतन्त्र यसरि तहसनहस हुने भएकोले चिन्तापुर्ण छ। : गभर्नर अधिकारी
babalkhabar // काठमाडौँ — कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढिरहेकाले अनिश्चितता बढेको र यसले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । एसियन क्लियरिङ युनियन सञ्चालक समितिको ४९औं बैठकका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले उक्त भर्चुअल उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ‘कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै थिए । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने कामलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अ
प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले भ्रष्ट्राचारी जो सुकै भएपनि कार्बाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले अहिलेको सरकारले अब वास्तवमै भ्रष्ट्राचार न्यूनिकरणको रणनीति लिएको बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरीको १८ औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार म गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने नाराका साथ अघि बढेका छौं यसले वास्तवमै भ्रष्ट्राचार रोक्नेछ । अब सरकारले देखावटीमा होइन, वास्तवमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गछौं सबै ढुक्क भएहुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।’ यसअघि नियन्त्रण गर्ने निकायले नै शक्तिको आडमा आफै भ्रष्टाचार गर्ने पाइएकाले नेपालमा भ्रष्ट्राचार निक्कै ठूलो समस्या भएकाले अब त्यस्ता निकाय र पदमा आसिनहरुलाईपनि छोड्ने छैनौँ । पहिलेको जस्तो चर्चामा आउन देखावटीरुपमा काम नगर्ने भन्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न एक्सन लिन थालिसकेको बताए । सोही
दुखद खबर : अक्सिजनको आवश्यकता बढिरहेको बेला मोरङको हिमाल अक्सिजन उद्योगमा किन अक्सिजन उत्पादन रोकियोत?पूरा हेर्नुहोस् ।
विराटनगर / कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नेमुवामा अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको हिमाल अक्सिजन उद्योगमा भने समस्या आएको छ । मंगलबार बिहान ७ बजेदेखि मोटरमा समस्या भएर उत्पादन बन्द हुँदा अक्सिजन आपूर्ति प्रभावित बनेको छ । उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित हुँदा अक्सिजन सपोर्टमा उपचाररत कोरोना संक्रमितलाई समस्या हुनसक्ने उद्योगले जनाएको छ । बिग्रिएको मोटर मर्मत सम्भार गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहे पनि सम्भव हुन नसकेको उद्योगका स्टोर इन्चार्ज उद्धाव थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मोटरमा एक्कासि समस्या आइदिएपछि अक्सिजन उत्पादन हुन छाडेको छ । त्यसपछि उद्योगले दिनभर माग भएर आएका अस्पतालहरुमा अक्सिजन आपूर्ति गर्न सकेन । उद्योगले दैनिक सात सय सिलिन्डरजति अक्सिजन उत्पादन गर्छ । तर उद्योगमा दैनिक १२ सय सिलिन्डरभन्दा बढी अक्सिजनको माग रहेको थापाले बताए । माग भएर
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपियो, खाद्यान्‍न पसल पनि बन्द
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा अवधि थप एक साता लम्बिएको छ । लकडाउन थपेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाइ गरिने भएको छ । थपिएको निषेधाज्ञामा बिहान ९ सम्म तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासको पसल खोल्न पाइने जनाइएको छ भने किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि एक साता लम्ब्याएको छ । मंगलबार बसेको बैठकले जेठ २० गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै यो अवधिमा खाद्यान्‍न पसल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । हरियो सागसब्जीको हकमा भने बिहान ९ बजेसम्म पसल खोल्न पाइने छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै सवारी साधनलाई सञ्‍चालनमा रोक लगाइएको छ । यसअघि जारी गरिएका सवारी पास खारेज गरिएको छ । मृत्यु संस्कार, विवाह लगायतका सवारी साधनलाई भने तोकिएका
काठमाडौं । मालीको सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अफ्रिकी संघका अनुसार सेनाले प्रधानमन्त्री मोक्तार औएने र राष्ट्रपति बाह नदालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मालीमा नौ महिनाअघि मात्र सेनाले कू गर्दै मुलुकका राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएको थियो । सोमबार मालीको सरकार पुनर्गठन भएसँगै सेनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको यो । पुनर्गठनको क्रममा गत वर्ष भएको ‘सैन्य कू’मा संलग्न दुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई सरकारबाट हटाइएको थियो । उनीहरुले पुनः सैन्य कू गर्न सक्ने आशंका बढेसँगै सरकारले उनीहरुलाई पदबाट हटाएको थियो । यो अन्तरिम सरकारमा सेनाको ठूलो प्रभाव रहेको भन्दै मानिसहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । यसअघि मालीमा भएको सैन्य कूको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक चरमपन्थी संगठनले मालीको एक क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाएका थिए । त्यसपछि फ्रा
लकडाउन थप कडा बनाइने के गर्न पाइन्छ ?
निषेधाज्ञा थपबारे निर्णय गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक ४ बजे बस्ने भएको छ । दिउँसो ४ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बस्ने बैठकमा निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ । एक महिना लामो निषेधाज्ञा बिहीबार राति १२ बजेबाट सकिने भएपछि थप गर्ने र झन कडा परिने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले पनि राजनीतिक गतिविधि बढ्नसक्ने देखिएकाले थप कडाइ गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा एक महिनाभित्र कोरोना संक्रमण दर कम हुने आकलन गरिएको जनाएको छ। अर्कातर्फ मन्त्रालयले नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेसम्मको तयारी समेत गरिरहेको छ । आज बस्ने भनिएको सिडिओको बैठकले थप निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाले भने मंगलबार मोटामोटी मोडालिटीबारे छलफल गरेर बुधबार थप निषेधाज्ञाको घोषणा गर्ने तयारी छ। उपत्यकामा वैशाख १६ गते
अब फ्रीमा इन्टरनेट सुबिधा,काहा – काहा उपलब्ध छत?
पहिलो चरणमा आठ जिल्लामा २० एमबीपिएस गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहकै सम्झदारीमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा काम प्रारम्भ भएको हो । मन्त्री गुरुङका अनुसार पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशको भूूकम्प अति प्रभावित ८ वटा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था,वडा कार्यालय, आभारभूत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ । यस अघि दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी ५ केबीपीएस इन्टरनेट विस्तार भएको थियो । तर, स्थानिय तहमा उक्त ५ केवीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रभावकारी नभएपनि स्थानिय तह र सञ्चार मन्त्रालयको पहलमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागीएको हो । मंगलबार भर्चुअल रुपमा आयोजना भएको कार्यक्रम मार्फत मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवाको विस्तार शुभारम्भ गरेका छन । क
नागरिकता विधेयका विषयमा अफवाह फैलाएको हेर्नुस के हो ?
वीरगञ्ज । पूर्वमन्त्री भीम रावलले सोमबार साँझ वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो रहेको समाचार आयो भन्दै ट्वीटरमा लेखे । पर्सामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा रहेको र प्रशासन कार्यालयबाट दिइने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा पनि बन्द रहेको अवस्थामा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलको टिप्पणीले धेरै मानिस अचम्ममा परे । सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको भोलिपल्ट ट्वीट गरेका कारण रावलको टिप्पणी सोही विधेयकतिर लक्षित थियो । रावलले मंगलबार बिहान आफ्नो उक्त विवादास्पद ट्वीट हटाएका छन् । तर उक्त विषयको तरंग उनले ट्विट डिलिट गरे पनि कायमै छ । उनले उक्त ट्वीट डिलिट गर्दै अर्को ट्वीट गरेका छन्, त्यसमा पनि आफूले अघिल्लो ट्वीटमा त्यस्तो लेख्नु कुनै गलत कुरा होइन भन्दै वचाउ गरेका छन् । ‘नागरिकता वितरण प्रक्रियाको बारेमा सहमति वा असहमति हुन
नागरिकता बाँड्न गृहकार्य
काठमाडौँ — सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करिब २ लाख आमा–बाबुका सन्तानलाई छरितो प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीकै बीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनअगावै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका करिब ६ लाख सन्तान वालिग भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता व्यक्तिको संख्या यकिन नभएको जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८ जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र बाबुको ठेगाना नखुलेका नेपाली नागरिकता वाहक महिलाका सन्तानलाई वंशजको नाग
एम्बुलेन्स प्रयोग गरी आबैध तस्करी
गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको एक एम्बलेन्समा गाँजा ओसार पसार गरेको आरोपमा धरानका दुई युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ हुडेक नेपालले सञ्चालन गरेको को १ च ५५५९ नम्बरको एम्बुलेन्समा सय किलो गाँजासहित एम्बुलेन्स चालक धरान १५ बाझगरा बस्ने ३६ वर्षीय बलबहादुर लिम्बु र धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका १ घर भई हाल धरान ११ बस्ने २८ वर्षीय पोशण राईलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । धनकुटाबाट आइरहेको बेला उनीहरु दुवैलाई सोमबार बेलका ९ बजे जिरोपोइन्ट चेकपोस्टमा गाँजासहित पक्राउ गरिएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले भने,‘एम्बुलेन्सको पछाडि भागमा २५ केजी दरको ४ वटा झोलामा सयकिलो गाँजा राखेको पाइएपछि गाँजा ओसार पसार र बिक्रिवितरण गरेको अभियोगमा बलबहादुर र पोशण पक्राउ परेका हुन् । दुवैलाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट आज (मंगलबार) नै लागूऔषध मुद्दामा म्याद थप गरि थप अनु